Isikhwama esipholile se-Nsulated, i-Duffle Bag, i-Garment Bag - iqondile
Ungayisebenzisa njengesikhwama esiphethe phezulu, noma esikhwameni sehlombe, noma esikhwameni se-crossbody ngokuthwala ngezibambo eziphezulu noma ngokugqoka ibhande ongaliguqula. Zonke izikhwama ze-canvas tote zenziwe ngokwezifiso.
Isikhwama se-Gym duffel sigcina izinto zakho siqu zihlelwe kahle. nikeza isikhala esiningi sokugcina imishini yokuzivocavoca, igiya lokuzivocavoca, izingubo ezengeziwe, ibhodlela lamanzi, umata wakho, amathawula nokunye okuningi.
Vumela amakhasimende azizwe ekhululekile nge
Iphakethe eliqondile belisunguliwe futhi lithembekile futhi nomhlinzeki ohlolwe nge-BSCI iminyaka engaphezu kwengu-10, ikakhulu sisezitolo zokupakisha nezikhwama zokuphromotha ezinabasebenzi abangaba ngu-100 no-3000 square metres wokwakha ifektri, futhi siyaziqhenya ngezitayela eziningi zezikhwama zephakheji uzothola kukhathalogi yethu. Iqoqo lethu lezikhwama liza ngemibala eminingi futhi lenziwa ngezinto ezifana Nokwelukiweyo okungafani, i-PP Nokwelukiweyo, i-RPET engalukiwe, i-Polyester noma iNayiloni, i-Canvas & Ukotini, iJute & Bamboo, i-Neoprene, i-PVC, i-PEVA nePhepha njll.